Aha ọhụrụ Xiaomi Mi 10 Edition nke ndị ntorobịa ga-abụ Mi 10 Lite Zoom mba niile | Gam akporosis
Aha Xiaomi ohuru nke ohuru nke ndi ntorobịa nke iri abuo bu nke Mi 10 Lite Zoom n’uwa dum
N'oge na-adịbeghị anya anyị na-eweta el ohuru Mi 10 Youth Edition nke Xiaomi, a elu-ọgwụgwụ nke Aims na-otu nke kasị mma na-ere ákwà na afọ a ekele ya magburu onwe uru maka ego na ihe niile ọ na-enye.
Ama a ga - eweta mba ụwa n'oge na - adịghị anya, na - enweghị atụ. O sina dị, Ọ gaghị erute n'ahịa mba ụwa n'okpuru aha ekwuru na mbụ, mana dị ka Mi 10 Lite Zoom. Ọ ga-abụ na China na a ga-eresị ya na mkpado Mbipụta ndị Ntorobịa.
Mkpughe a bịara n’ụzọ dị egwu. Qualcomm kwupụtara ngwangwa ngwangwa maka azịza dị iche iche nke akpọrọ Quick Charge 3+. A mara ọkwa Xiaomi Mi 10 Lite Zoom na ndepụta nke ndị nrụpụta semiconductor.
Companylọ ọrụ China ekwuputabeghị smartphone ọ bụla nwere aha ahụ., ma o doro anya na ọ bụ Xiaomi Mi 10 Youth Edition dị nnọọ malitere; ndị ọzọ, àgwà nke ngwaọrụ ahụ ga-adịgide. A ga-akpọ ngwaọrụ a nke a n'ahịa zuru ụwa ọnụ, ihe na-abịaghị dịka nnukwu ihe ijuanya ebe ọ bụ na mgbanwe aha Xiaomi ji ọtụtụ ekwentị ya maka mpaghara ọ bụla maara nke ọma.
Ekwetabeghị mkpanaka ọhụrụ ahụ n'ụwa niile, mana ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya. Onye a na-abịa na 6.57 inch nke Super AMOLED nwere mkpebi FullHD + nke 2,400 x 1,080 pikselụ, aha Qualcomm aha ya bụ Snapdragon 765G SoC, RAM 6/8 GB na ebe nchekwa dị n’ime 64/128/256 GB. O nwekwara batrị ikike nke 4,160 mAh na nkwado maka teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa 22.5 watt.
Banyere ese foto, enwere modulu quad nke nwere ihe ndị na-esote mmetụta: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP. Igwefoto a na-enye ngwakọ ngwakọ nke ruru 50X. Enwekwara onye na-agba égbè maka selfies, oku vidiyo, mmata ihu na ihe karịrị 16 MP nọ na ọkwa nke panel ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Aha Xiaomi ohuru nke ohuru nke ndi ntorobịa nke iri abuo bu nke Mi 10 Lite Zoom n’uwa dum